Global Voices teny Malagasy » Iran: Kandidà Reformista Voaràra Tsy Hirotsaka Hofidiana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 23 Jolay 2017 11:42 GMT 1	 · Mpanoratra Fred Petrossian Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Iràna, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Fifidianana, Fitantanam-pitondrana, Fivavahana, Mediam-bahoaka, Politika, Tantara
Nampihena ny fanantenan'izy ireo  amin'ny fifidianana parlemantera amin'ny volana ambony ny Iraniana Reformista  rehefa nesorin'ny manampahefana ny ankamaroan'ny kandidàn'izy ireo, anisan'izany ireo Solombavambahoaka sasany sy ilay “Rain'ny ny Repoblika Islamika”, zafikelin'i Ayatollah Khomeini . Ao Iran, tsy maintsy mahazo fankatoavana alohan'ny hifidianan'ny vahoaka azy ny kandidà.
Raha maro tamin'ireo kandidà tsy nankatoavina no “nanompo” ny Fanjakana Islamika nandritra ny taona maro, toa mihevitra ny manampahefana ankehitriny fa tsy azo porofoina ny finoan'izy ireo ny islamo sy ny fitokisan'izy ireo ny fitondrana. Nantsoin'ny Filoha reformista teo aloha, Mohammad Khatami  ho loza izany fanesorana kandidà izany. Tsy fahita firy eo amin'ny tantara Iraniana ny fifidianana malalaka sy mangarahara, ary tsy mba nahitàna izany (fifidianana malalaka sy mangarahara izany) ny firenena tao anatin'ny 25 taona.
Mohmmad Ali Abtahi, filoha lefitra teo aloha sady bilaogera mihevitra  fa fantenana alohan'ny hanatontosàna ny fifidianana ny ankamaroan'ireo mpikambana ao amin'ny parlemanta. Hoy izy:
Akbar Montakhabi nanoratra  [Fa] hoe:
Ahmad Shirzad, Solombavambahoaka reformista teo aloha sady bilaogera nilaza  [Fa] fa toa tsy te-hanome ny toeran'izy ireo ho an'ny hafa amin'ny fomba demaokratika izay olona eo amin'ny fahefana. Nilaza koa izy fa angamba mahomby amin'ny fotoana fohy ny fihetsika tahaka izany, saingy naminavina fa hiteraka krizy ara-politika mandritra ny fotoana maharitra ela izany.
Omid Memarian nilaza  [Fa] fa mahaliana raha olona maro nesorina izay nanompo ny Repoblika Islamika no tsy manohana ny politikan'i Ahmadinejad. Nilaza koa ilay bilaogera fa mampidi-doza ho an'ny tsirairay ny parlemanta izay mankatò ny filoha Iraniana ary tsy manome zava-baovao.
Nilaza  i Jomhour fa mampita hafatra avy amin'ny fitondrana tsirefesimandidy ao amin'ny firenena izany fanesorana izany; Tsy miova isika. Nilaza ilay bilaogera fa mahatsikaiky sy tsy mitombina ny kabary tsara lahatra milaza amin'ny olona rehetra mba handray anjara amin'ny fifidianana na inona na inona toe-javatra.
Nanoratra  taratasy misokatra ho an'ireo kandidàn'ny hetsika reformista ny vondrona bilaogera miantso azy ireo hoe “bilaogera Yahoo 360″ ary nanontany azy ireo fanontaniana maromaro momba ny tanjon'izy ireo raha toa ka voafidy: Anisan'ireo fanontaniana fototra napetraky ny bilaogera ny hoe: “Inona no fandaharanasanareo hanafoanana ny fanavakavahana eo amin'ny miralenta, hampiroboroboana ny fampiasam-bola avy ivelany, hanohanana ny ONG sy hanaja ny zon'olombelona.
Mehrr, bilaogera mpanaraka fombantany nilaza  [Fa] fa loza ho an'ny fiarahamonina ny reformista. Hoy ihany koa izy:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/07/23/104122/
 Nampihena ny fanantenan'izy ireo: http://news.yahoo.com/s/afp/20080206/wl_mideast_afp/iranpoliticsvote_080206091256
 Iraniana Reformista: http://en.wikipedia.org/wiki/Iranian_reformists